आइजिपी प्रकाश अर्याललाई बधाई दिन हेडक्वार्टर पुगे जयबहादुर चन्द,सिलवाल किन गएनन् ?
कस्तो छ प्रकाश अर्याल,जयबहादुर चन्द,नवराज सिलवाल र बमबहादुर भण्डारीको आपसी सम्बन्ध ?
Tuesday, 11 Apr, 2017 12:46 PM
२९,चैत,काठमाडौं । सोमबार साझ सरकारले डिआइजी प्रकाश अर्याललाई आइजिपी नियुक्त गर्यो । सबैले बधाई दिन थाले । सोमबार राती नै आइजिपी बनाएका अर्याललाई गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले आइजिपी दज्र्यानी चिन्ह लगाए ।
सरकारले आइजिपी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय बदर गर्न आदेश दिएपछि सरकारले अर्याललाई आइजिपी बनाएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध डिआइजी नवराज सिलवाल आफुलाई आइजिपी बनाईपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले सर्वोच्चको आदेशलाई सांकेतिक रुपमा काउन्टर गर्यो अर्याललाई आइजिपी बनाएर । नेपाली काँग्रेसले त सरकारले गरेको निर्णयमाथी अदालतले हस्तक्षेप गरेको भन्दै पार्टीको केन्द्रिय समितिबाटै आपत्ति जनायो । भलै डिआइजीमध्येबाट जो कोहिलाई पनि आइजिपी बनाउन पाउने सरकारको स्वविवेकको कुरा थियो । अदालतको आदेशपछि त्यसबारे पक्ष र विपक्षमा बहस निरन्तर चलिरहेका छन् ।
सोमबार साझ आइजिपी बनेका अर्याललाई बधाई र शुभकामना ओइरो लागिरह्यो । सोमबार साझ नै जयबहादुर चन्दले पनि प्रकाशलाई टेलिफोन गरे । संगै नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेका अर्याल र चन्दको दोस्ती पनि राम्रै छ । चन्दले टेलिफोनमा अर्याललाई आइजिपी बनेको बधाई दिए । एकछिन भलाकुसारी गरे ।
त्यसलगत्तै चन्दले एक अनलाईनलाई प्रतिक्रिया दिदै सरकारको निर्णय मान्न आफु तयार रहेको बताए । यद्यपी चन्दलाई सरकारले के गर्छ त्यो अहिले नै यकिन भइसकेको छैन । सरकारले चन्दलाई के जिम्मेवारी दिन्छ वा चन्दले अब के गर्छन त्यो पनि यकिन छैन । तर प्रकाश अर्याललाई डिआइजी नवराज सिलवालले भने बधाईसम्म दिएनन् । कारण सिलवाल र प्रकाश अर्यालको सम्बन्ध त्यत्ती सुमधुर छैन । बरु जयबहादुर चन्द,प्रकाश अर्याल र बमहादुर भण्डारीबिचको सम्बन्ध निकै राम्रो छ ।
मंगबार बिहान पनि यस्तै भयो । नवनियुक्त आइजिपी अर्याललाई बधाई दिन र उनको ब्रिफिङमा उपस्थित हुन उपत्यकाका सबै एसपीदेखि डिआइजीसम्मलाई डाकियो । त्यहाँ सबैजसो अधिकृत पुगे । हातमा फुलको गुच्छा बोकेर जयबहादुर चन्द पुग्दा माहौल नै अर्कै देखियो । भलै ‘चेन अफ कमाण्ड’ स्वीकार गर्ने प्रहरी अफिसरका लागि त्यो कुनै नौलो कुरा थिएन । चन्दले अर्याललाई फुलको गुच्छा दिएर हात मिलउँदा दुवै ओठमा मुस्कान देखिन्थ्यो । तर मंगलबार बिहान पनि आइजिपी अर्याललाई बधाई दिन हेडक्वार्टर पुगेनन्,डिआइजी नवराज सिलवाल । तर अब नवराज सिलवाल के गर्छन भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।